Vivo S1 Pro (8/128GB)
Vivo S1 Pro စမတ်ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်နို၀င်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဖုန်းတွင် 6.38 inch အရွယ် atouchscreen မျက်နှာပြင်ဖြင့် resolution 1080x2340 pixels နှင့် aspect ratio 19.5:9ရှိသည်။ Vivo S1 Pro တွင် octa-cor QualcommSnapdragon 665 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။Internal 128GB, 8GB RAM ပါရှိပါတယ်။ Camera ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Main Camera 48 MP,8 MP,2 MP,2 MP ဖြစ်ပီးတော့၊ Selfie Camera 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm သုံးပေးထားပါတယ်။ဘက်ထရီကတော့ 4500mah၊ Fast Charging 18W ပါဝင်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။Colours တွေကတော့ Knight Black, Fancy Sky ဖြစ်ပါတယ်။
Screen အနေနဲ့ကတော့ 6.22 inch ရှိမှာဖြစ်ပြီး Resolution အနေနနဲ့ကတော့ 720 x 1520 pixelsကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Vivo Y91i ကို Qualcomm Snapdragon 439 Chipset တွေအသုံးပြုထားပီး အမြန်နှ ုန်း4x 1. 95GHz ARM Cortex-A53 နှင့်4x 1.95GHz ARM Cortex-A53 ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Ram အနေနဲ့ လဲ 2GB နှင့် Rom အနေနှင့်လဲ 32GB ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ . . . Android 8.1 Oreo Operation System နှင့် Funtouch OS 4.5 User interface တို့ကို အသုံးပြ ုထားသောကြောင့် ဂိမ်းကစားခြင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း သီချင်နားထောင်ခြင်းတို့ကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပဲ အသုံးပြုနိင်ပါသည်။ . Dual Sim ကို Dual Stand-by Support ပေးမှာဖြစ်ပြီးပါတယ်။ အရှေ့ ကင်မရာ 13 Megapixel +2Megapixel ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sefile camera အနေနဲ့ကတော့ 8MP ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Battery အတွက်ကိုလဲ 4030 mAh Li-Ion Battery ကိုအသုံးပြ ုထားပါသည်။
VIVO Y12ရဲ့ Display Type ကိုတော့ IPS LCD ကိုသုံးပေးထားပေးပါတယ်။OS အနေတော့ Android 9.0 နဲ့လာပေးထားပါတယ်.....Camera ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Main camera 13MP / 8MP / 2MP လာထားပြီး Selfie Camera ကတော့ 8 MPကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ဘက်ထရီ 5000mah ကိုသုံပေးထားခြင်းကြောင့် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Coloursကတော့ အပြာရောင်၊ အနီရောင် ၂ရောင်လာပါတယ်။
Vivo Y11 စမတ်ဖုန်းသည် 2019 အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.35 " ရှိပြီး IPS LCD capacitive touchscreen ကို အသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Internal 32GB/ RAM3 ဖြစ်ပီးတော့ Main Camera 13 MP, f/2.2, PDAF2MP, f/2.4, (depth)၊ ဘက်ထရီ 5000mah Charing 10W ဖြစ်တာကြောင့် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Colour တွေကတော့ Coral Red, Jade Green တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo V19 စမတ်ဖုန်းသည် 6.53 inch touchscreen မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး resolution 1080 x 2400 pixels ရှိပြီး Vivo V19 ကို Main Camera 48MP / 8MP / 2MP / 2MP နှင့် Selfie Camera 32MP / 8MP ဖြင့်အသုံးပြုထားသည်။ Vivo V19တွင်Android 10 ကိုအသုံးပြုထားပြီး 4500mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်။ Fast Charging 33W ဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
VIVO Y90 (2/32GB)
VIVO Y90 ဖုန်းလေးဟာဆိုရင်တော့ Screen size 6.22-inch ရှိပြီး HD+ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Waterdrop Notch ထဲက Selfie ကင်မရာကတော့ 5MP ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ကျောဘက်မှာတော့ 8MP ကင်မရာတစ်လုံးကို LED ဖလက်ရှ်နဲ့အတူ တွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Fingerprint တော့ ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ Face unlock ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo Y90 ရဲ့ SOC ကို Helio A22 နဲ့ဖြစ်ပြီးRAM 2GB / ROM 32GB ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘက်ထရီကတော့ အားရစရာပါ 4030 mAh ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo Y30 စမတ်ဖုန်းသည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား6.47 inch ရှိပြီး IPS LCD capacitive touchscreen ကို အသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Internal 128GB/ RAM4 ဖြစ်ပီးတော့ Camera ပိုင်းမှာတော့ Main Camera 13MP/ 8MP/ 2MP/ 2MP ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 5000mah Charing 10W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Colours တွေကတော့ အပြာရောင်၊ အနက်ရောင် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo Y30 (4/64GB)
Vivo Y30 စမတ်ဖုန်းသည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား6.47inch ရှိပြီး IPS LCD capacitive touchscreen ကို အသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Internal 64GB/ RAM4 ဖြစ်ပီးတော့ Camera ပိုင်းမှာတော့ Main Camera 13MP/ 8MP/ 2MP/ 2MP ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 5000mah Charing 10W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Colours တွေကတော့ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo S1 Prime (8/128GB)
Vivo S1 Prime ကတော့ မျက်နှာပြင် 6.38 inchအရွယ် ရှိပြီးတော့ Internal 128GB, 8GB RAM ပါရှိပါတယ်။ Camera ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Main Camera 48 MP,8 MP,2 MP,2 MP ဖြစ်ပီးတော့၊ Selfie Camera 16MP သုံးပေးထားပါတယ်။ဘက်ထရီကတော့ 4500mah၊ Fast Charging 18W ပါဝင်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။Colours တွေကတော့ Jade Black, Nebula Blue ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း သစ်လွင်တယ့် ပုံစံနဲ့ လာပေးထားတဲ့ Vivo Y20ရဲ့ Display ပိုင်းကတော့ IPS LCD သုံးထားပြီးတော့ Resolution ကလည်း720 x 1600 pixelsလာပေးထားပါတယ်။OS ကိုလည်းAndroid10ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။Processorပိုင်းကို Snapdragon 460လာပေးထားပြီ သူရဲ့ main camera ကတော့ 13+2+2 MP နဲ့ Selfie camera ကတော့ 8 MPကိုသုံးပေးထားပါတယ်။Batteryကတော့5000mAhပါဝင်လာပြီးFirstcharging10Wအထိတောင်ပါဝင်လာပါတယ်။
Foomee BQ20 Car Charger Kit
ကားပေါ်တင် ဖုန်းအားအပြည့်နဲ့ရှိမနေချင်ဘူးလား .....သတ္တုကိုယ်ထည် နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ car charger မီလင်းစနစ်ပါရုံမက ၁ မီတာရှည်တဲ့ ရိုးရိုးအားသွင်းကြိုးကပါလိုက်သေး output QC3.0 ဆိုတော့ ဖုန်းအားဘယ်လိုပြည့်သွားမှန်းမသိဖြစ်သွားမယ်.....